Iyaqina eyokukhulelwa kukaDJ ingane yesibili
MUVA nje useshutha izithombe ezifihla isisu kanje kwi-Instagram njengoba esolwa ngokuthi usekhulelwe ingane yakhe yesithathu Isithombe: INSTAGRAM
Nqobile Masimula | April 28, 2021
IKHULUNYELWA phansi indaba yokukhulelwa kukaDJ wodumo waseThekwini, ingane yakhe yesithathu.
Kuthiwa uSithelo “Sithelo The DJ” Shozi (27) ongabonakali emicimbini futhi kade agcina ukunandisa, usezithwele ingane yesibili yendodana yesiqumama saseThekwini, u-Andile Mpisane (20).
Umthombo weSolezwe ngeSonto osondelene noDJ ukuqinisekisile ukuthi usezithwele.
“Simangele sonke ukuthi kungathi esemncane kanje uFlo (igama lengane yokuqala) usengaphinda enye eduze kanje. Usengateta noma yinini ngoba usenesikhathi ekhulelwe,” kusho umthombo.
Uthe uSithelo akasahlanganyeli kakhulu nabantu ezindaweni okugcwala kuzona ngoba uzimisele ukusifihla isisu njengoba enza ngesikhathi ekhulelwe ingane yabo yokuqala no-Andile.
Leli phephandaba like labika ngokukhulelwa kwakhe phambilini, lapho waphika walala ngomhlane ukuthi uzithwele. Ngokuhamba kwesikhathi kwagcina kuqinisekiswa ukuthi ngempela wayezithwele ingane kaMpisane, eyazalwa ngonyaka odlule.
ISITHOMBE sakhe sakamuva esiveza ubukhulu besisu Isithombe: TWITTER
Ethintwa uSithelo uthe usahlabe ikhefu elincane emculweni kodwa uyobazisa abalandeli bakhe uma sekukhona aphezu kwakho. Kuthe uma intatheli imhalalisela ngokukhulelwa kwakhe wavele wabhoka ngolaka, ebuza ukuthi imthintela ukuzwa ngomsebenzi wakhe noma ifuna izindaba zakhe zangasese.
Ukhunjuziwe ukuthi nasekuqaleni waholela ngisho abalandeli bakhe oPhathe, ephika ephindelela ukuthi uzoba nengane no-Andile.
“Ukuthi ngiqamba amanga noma ngiqinisile akundaba yamuntu. Akekho umuntu okumele ngizichaze kuyena. Impilo yami yangasese kayihlangene namuntu, futhi ngibhizi ngiyathenga sisi,” esho evala ucingo kabi.
Ozibize ngoMandla Mtshali, othe uyimenenja ka-Andile Mpisane, uthe kungamampunge ukuthi u-Andile usekhulelise uSithelo ingane yesibili.